Indlu eyi-3 Bed Terraced To Rent In Northampton, Northamptonshire
Real Estate Listings: » Residential homes » Houses » GB » Northamptonshire » Northampton » Northampton » Indlu eyi-3 Bed Terraced To Rent In Northampton, Northamptonshire1
United Kingdom, Northamptonshire, Northampton, Northampton, Nn1 1nh
Ikhodi Yokuposa: Nn1 1nh
Izici: EPC Rating C, Video Tour Available, Available Mid May, Three Bedrooms, Popular Residential Location, Communal Parking
I-Video Tour Iyatholakala - Iyatholakala maphakathi noMeyi yile mpahla enamagumbi okulala amathathu ese-Ecton Brook. Njengoba ungena kulowo mhlaba, ihholo lokungena likuholela ku-aw / c, igumbi lokugqoka kanye negumbi lokuphumula / igumbi lokudlela. Igumbi lokudlela liholela ekhishini eligcwele ngokuphelele elinewindi elicwebezelwe kabili elibheke engadini engemuva. Esitezi sokuqala, kunamakamelo okulala aphindwe kabili nendlu yokugezela yomndeni. Ngaphandle, kunezingadi ngaphambili nangemuva. Ngaphezu kwalokho, uzothola ukupaka komphakathi ngaphandle komgwaqo.I-IEcton Brook intuthuko encane etholakala kude neGreat Billing Way, esempumalanga yeNorthampton Town Centre. Le ndawo inendawo enhle yokungena ku-A45 futhi itholakala kalula eMoulton Park Industrial Estate. I-Weston Favell Shopping Centre iseduze kakhulu futhi imi eduze kweLings Forum Sports Complex. Kunezinsizakalo zebhasi ukuya nokubuya eNorthampton Town Centre. Ukufinyelela ku-M1 Junction 15 kudlula ngendlela ye-A45 Nene Valley Way enezinqola ezimbili, ecishe ibe yimayela ukusuka lapho. Izikole zendawo zifaka iThorplands Primary School nemfundo yamabanga aphakeme eThe Northampton Academy eBilling Brook Road. Le ndawo inendawo enhle yokungena ku-A45 futhi itholakala kalula eMoulton Park Industrial Estate. I-Weston Favell Shopping Centre iseduze kakhulu futhi imi eduze kweLings Forum Sports Complex. Kunezinsizakalo zebhasi ukuya nokubuya eNorthampton Town Centre. Ukufinyelela ku-M1 Junction 15 kudlula ngendlela ye-A45 Nene Valley Way enezinqola ezimbili, ecishe ibe yimayela ukusuka lapho. Izikole zendawo zifaka iThorplands Primary School nemfundo yamabanga aphakeme eThe Northampton Academy eBilling Brook Road. 108757/3
Xhumana nomkhangisi 0160486xxxx
19 Bridge Street, Northampton
, Nn1 1nh
&nbspNorthampton in Northamptonshire (United Kingdom), Nn2 7sl
950 Pound £ / Njalo ngenyanga
900 Pound £ / Njalo ngenyanga
895 Pound £ / Njalo ngenyanga
1 Bed Terraced House To Rent In Northampton, Northamptonshire
455 Pound £ / Njalo ngenyanga
Izikole eziseduzane Nn1 1nh